Ugreen, izesekeli ezihlukahlukene zamadivayisi ethu | Izindaba Zegajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | 28/10/2021 18:00 | Izesekeli, Gadgets
Kwa-Actualidad Gadget siyaqhubeka nokwenza esikuthanda kakhulu, zama amagajethi kanye nezinsiza bese sikuxoxela ngesipiliyoni sethu. Akukhona okokuqala ukuthi abangani be Ugreen Bathemba ulwazi lwethu ngakho. Yingakho namuhla sikhuluma ngephakethe elincane lemikhiqizo ye-Ugreen.
Ikakhulukazi, kukhona izesekeli ezine esizokhuluma nawe ngazo. Ihluke kakhulu komunye nomunye, kodwa ngaphezu kwesignesha yomkhiqizi, banokuthile okufanayo. Bonke babe ekhulelwe i- enze ukuphila kube lula kithi, futhi asize ukuthi izinto zethu zikagesi zandise amathuba azo uma kungenzeka.
1 Imikhiqizo Emine Eluhlaza Yezidingo Ezihlukene
2 Ama-headphone we-Ugreen HiTune X5
3 I-adaptha ye-Bluetooth ye-Nintendo Switch
4 Isibambi sethebhulethi
5 Izimbobo eziningi ze-USB C
Imikhiqizo Emine Eluhlaza Yezidingo Ezihlukene
Sinazo i-headphones Amadivayisi angenawaya we-TWS, i-HiTune X5. A I-adaptha ye-USB-C i-multiport enamathuba ahlukahlukene .. I-adaptha yokudlulisela nge Bluetooth kusukela Nintendo Switch. Futhi ekugcineni, a ideskithophu imele ithebhulethi.
Ama-headphone we-Ugreen HiTune X5
wakhe ama-headphone "phezulu" kakhulu avela ku-Ugreen nokubukeka kwayo, kanye nolwazi lwethu lokuyisebenzisa, kuqinisekisa lokhu. Ngaphezu kwakho konke, bagqama ngokubukeka kwabo ngokomzimba. Umumo abanawo awufani nanoma iyiphi enye imodeli. Futhi lokho kuyizindaba ezinhle kwabaningi. Sibonile futhi sahlola izinhlobo eziningi zama-headphone, futhi ngezinye izikhathi amaphutha amakhulu omklamo enziwa ukuthi "ahluke".
I-Los Okuluhlaza X5 bayisibonelo somklamo wokuqala noma ohlukile. Futhi nakuba ngokuthandwa, imibala ibonisa ukubukeka okuhlukile ngenxa yabo bobunjwa oyindilinga futhi kuya Okumpunga ekhethelwe ukwakhiwa kwayo. Eqinisweni, izinto zokwakha ezikhethiwe kanye ne ukuqedwa kombala ocwebezelayo kubenza babukeke beyiprimiyamu kakhulu.
Ikesi lokushaja nalo lakhiwe ngezinto zepulasitiki ezinemiphetho ecwebezelayo. Nge ama-LED amathathu phambi kwayo abasinika yona ulwazi mayelana nesimo sokukhokhiswa ibhethri. Futhi nge isisekelo kazibuthe lapho ama-headphone alingana kahle ngokuwasondeza ndawonye.
I-Los Izilawuli headphone physics kukhona ethintekayo. Singalawula ukudlalwa komsindo ngokudlulisa amathrekhi phambili noma emuva. Misa kancane o dlala izingoma. Phendula noma nqaba izingcingo, futhi bancenge umsizi wethu wezwi. Konke ngokuphindaphinda kokuchofoza izinkinobho noma "ukuthinta", noma ngokuchofoza izinkinobho ezinde.
Ama-headphone e-Ugreen X5 angenantambo asinika a ukuzimela kuze kube ngamahora ayi-28 sibonga ikesi layo lokushaja. Futhi bayakwazi ukusebenza okungaphazamiseki kuze kube Amahora ayi-7 ngokulandelana. Okungaphezu kokwanele ukuthi ungakhathazeki ngebhethri lakho izinsuku eziningi zokusebenzisa.
Thenga ama-headphone akho lapha I-Ugreen HiTune X5 ku-Amazon.
I-adaptha ye-Bluetooth ye-Nintendo Switch
Igama layo alishiyi indawo yokungabaza ngomsebenzi walesi sisekeli. Njengoba sakutshela ekuqaleni, enye yezinhloso zika-Ugreen uku sandise amathuba emishini yethu electronic Futhi kucacile ukubala uxhumano lwe-bluetooth ku-Nintendo Switch yethu ikwenza isisekeli esingcono nakakhulu.
Isakhiwo sayo somzimba kanye nesimo esinaso kuncike ngokuphelele kulokho kwekhonsoli yevidiyo uqobo. Futhi njengoba kulindelekile, izolingana kahle nalena futhi ngeke kube isithiyo ekusetshenzisweni kwayo ngendlela efanele. Ngaphandle kokungabaza isesekeli ukuthi izobonakala iyingxenye yedivayisi ngokwayo.
Siyabonga ku-adaptha I-Bluetooth 5.0 by Ugreen ekugcineni singasebenzisa ama-headphone ethu angenantambo ngeswishi yeNintendo izintandokazi. Baxhume kalula futhi ujabulele isipiliyoni sokudlala esingenantambo. Ngeyakhe 120 mAh ibhethri uzoba nokuningi kokudlala kuze kufike emahoreni ayisithupha ngokuqhubekayo.
Vele uyivule ngokushesha nje lapho isixhunywe ku-Nintendo yakho bese uxhuma amahedfoni akho angenantambo nesixhumi esibonakalayo sakhona ngaso leso sikhathi. Uma sekuxhunyiwe, ukuxhumana kuzohlala kwenziwa ngokuzenzakalelayo. Ine- kungenzeka ukuxhuma ama-headphone amabili ngesikhathi esisodwa, uma ngabe wabelana ngegeyimu. Futhi sinebanga elingafika kumamitha ayi-10.
Njengoba sibona, i-accessory ehlangabezana nemfuneko esishilo ukuthi i-Ugreen ihlongozwayo. Le divayisi encane yenza Izinzuzo zethu zokushintsha ekuxhumekeni futhi unikeze umuzwa womsebenzisi onethezeke kakhudlwana futhi ekugcineni ube ngcono kakhulu futhi uphelele.
Thola i-adaptha yakho I-Bluetooth Nintendo Shintsha ku-Amazon
Esinye isisetshenziswa esikwazile ukusizama yi- Isitendi sethebhulethi esiluhlaza. Isesekeli esihambe kancane ukuzinza emakethe futhi okumangazayo safika kamuva kakhulu kunamaphilisi ngokwawo. Kulokhu, ukusekela lokho singasebenzisa cishe noma iyiphi imodeli yethebhulethi nokuthi izoyibamba ivikelekile futhi iqine endaweni eyisicaba.
Yiba nokusekela amaphilisi ethu kwenza ukusetshenziswa kwayo kukhululeke kakhudlwana. Ikakhulukazi uma sisebenzisa ithebhulethi ukusebenzisa okuqukethwe kwe-multimedia ngezikhathi lapho kungadingeki ukuthi siyibhale noma sihlanganyele nayo. Ukwesekwa etafuleni ngenkathi sisebenza, noma ekhishini ukuze sizame ukwenza leyo recipe ye-YouTube.
I-Ugreen futhi inengxenye yekhathalogi yayo enikezelwe kuzisekelo zamathebulethi namaselula. Futhi lena esibe nenhlanhla ukuyizama iyona ntofontofo kakhulu ukuyihambisa njengoba igoqeka kahle. Futhi-ke, futhi ukhululekile ukuba nokusekelwa okuthembekile ngaso sonke isikhathi sokusebenzisa.
Yakhiwe upulasitiki Njengoba i-hinge iqedwe ezintweni zensimbi, inikeza isithombe sochwepheshe kakhulu. I-suhlelo lokugoqa lulula ngesikhathi esifanayo esiphumelelayo futhi singalungisa ukuphakama nokuthambekela ukuze ukusetshenziswa kwayo kukhululeke ngenkathi uhlezi noma umile, isibonelo.
Thenga ku-Amazon Usekelo lwethebhulethi / lweselula ku-Amazon
Izimbobo eziningi ze-USB C
Futhi okokugcina kwezesekeli esizethula kuwe kube yi- kubalulekile, ngaphezu kwakho konke kubasebenzisi bekhompyutha ye-MacBook. I ukuxhumana okubuthakathaka, con ukungabi khona ngokuphelele kwamachweba, enikeza amamodeli ahlukahlukene amalaptop we-Apple. Kwezinye izimo banayo kuphela isixhumi esisodwa se-USB Type-C. Futhi kuyadingeka ukuba ne-accessory yalolu hlobo ukuze ukwazi ukuxhuma i-peripheral.
Ubani ongadingi ukuxhuma okungenani imemori ye-USB eyodwa nganoma yisiphi isikhathi? Hhayi-ke, kungenzeka ukuthi ngaphandle kwalesi sisekeli asikwazi ukukuxhuma nganoma iyiphi indlela. Yingakho lolu hlobo lwesixhumi lubaluleke kakhulu, ikakhulukazi kulabo abasebenzisa lolu hlobo lwedivayisi. Ngaphandle kokungabaza, into ebalulekile ukuze ukwazi ukusebenzisa "okuvamile" ikhompuyutha. I-Ugreen iletha isixhumi se-multiport esikwazi ukuphindaphinda amathuba ekhompyutha yakho.
Ngokuqondile, ngesixhumi se-Ugreen se-multiport, sinakho amachweba amathathu we-USB 3.0, itheku I-HDMI futhi ezimbalwa Slots ohlangothini lwayo ukuze funda amamemori khadi. Nakuba sigeja imbobo ye-USB C njengoba ngaphandle kwayo ngeke sikwazi ukusebenzisa isixhumi nokushaja ibhethri ngesikhathi esifanayo.
Lapha ungakwazi ukuthenga 6-in-1 USB C Hub ku-Amazon
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » Ugreen, izesekeli ezihlukahlukene zamadivayisi ethu